UMandela kanye nokhetho luka-1994 lukaRaymond Louw
Ukwabelana Ngekusasa Elivamile
Wonke umuntu ukhuluma okhethweni oluvamile luka-1994 oluguqula iNingizimu Afrika emphakathini wobumbene obandlulula ubuhlanga, waba yintando yeningi engewona ubuhlanga njengesimangaliso. Izinsuku ngaphambi kwamalungu okhetho okhethweni we-militarist neo-Nazi i-AWB, i-Afrikaner Weerstandsbeweging (Afrikaner Resistance Movement) yenza uhlelo lokuqhuma kwamabhomu okuyinto ehlatshelwe abantu abaningi.
Kwakuyisiteleka esinqunyiwe sokuqeda ukhetho ababonayo njengoba bebonisa ukuphela komsebenzi wabo wokuphila uma kungenjalo ukuphela kwabo njengabantu. UMandela nohulumeni benqatshelwe ukwesatshiswa futhi ukhetho luqhubeka. Kodwa ukuhlaselwa okubulalayo kwaholela ekulahlekelweni okukhulu kokuphila nokubhujiswa endaweni.
Ikhetho lenzeke e-aura lokuthokoza nokungabambisani phakathi kwezinhlanga. Akukho okufana nakho okwake kwabonwa ngaphambili eNingizimu Afrika. Kwaba sengathi ngabe abamhlophe nabamnyama bazitholela ngokwabo okokuqala njengoba abantu behlanganyela isiphetho esivamile. Ubuhlobo bomnumzane nenceku obubanjwe ebugqilini ngamakhulu eminyaka bubonakala sengathi bunyamalale sengathi kwakungakaze kube khona.
Iminyaka Engamashumi amathathu Ngaphambili
Naphezu kokubaluleka kwalesi senzakalo, uMengameli Mandela ubebe engaphansi komuntu uma engavumeli imicabango yakhe ibuyele emuva kulolo Msombuluko ngo-Ephreli 1964 - cishe eminyakeni engama-30 ngaphambili - lapho emi emgodini ukuze aqale ukuzivikela ngamacala yokuqothula ngesikhathi sokuthiwa yi-Rivonia Trial. Lesi yisikhathi lapho, enkantolo eboshiwe, wafunda amahora amane isitatimende ngolwazi olugcwele lokuthi ukuxoshwa kwakuyisigwebo esikhulu futhi ukuthi lokho ayekusho kungabeka i-noose emaphethelweni akhe kanye nozakwabo. Uphelile, "Ngiye ngilwa nokubusa okumhlophe futhi ngilwa nobusuku obumnyama. Ngiye ngawazisa umqondo wenhlangano yentando yeningi nenkululeko lapho bonke abantu behlala ndawonye ngokuvumelana nangamathuba afanayo. phila futhi ubone ukuthi kwenzeke. Kodwa, Nkosi yami, uma kudingekile ukuthi kuyinto engcono engilungele ukufa ngayo."Translated by Nsika Khoza